An-kitsim-po: ny fomba fiasa ihany … | NewsMada
An-kitsim-po: ny fomba fiasa ihany …
Tsy voatery hampiova zavatra ny fanovana anarana fa ny fomba fiasa ihany no mitondra azy. Hatao governora izao ny hitondra ny faritra fa tsy lehiben’ny faritra intsony. Betsaka izay fanovana anaranan’ny sampandraharaham-panjakana izay, saingy tsy any loatra ny olana fa eo amin’ny fanatanterahana ny asa. Nampiova inona, ohatra, ny firaisana navadika ho kaominina sy ny fivondronana natao ho distrika ? Nahoana anefa ny fokontany najanona ho fokontany ihany fa tsy natao kartie?
Toy izany koa ny fanovana anarana samihafa any anivon’ny sampandraharaham-panjakana, na fampisarahana na fampitambarana minisitera maromaro, tsy zava-baovao, fa efa saika nanao toy izany avokoa ny fitondrana nifandimby. Fiantraikan’ny asa any amin’ny fiainam-bahoaka no hitsarana azy ireny, koa na miova na tsy miova ny anaran’ny sampandraharaham-panjakana iray, ny fomba fitantanana ihany ny tena zava-dehibe.
Na izany aza, manana ny fomba fijeriny manokana ny mpitondra. Mety hanamora ny fomba fitantanany izany, na koa te hampiavaka ny fitondrana tantanana fotsiny. Olana matetika ny tsy fisian’ny fitohizan-draharaham-panjakana raha voamarina fa nahomby ny tetikasa nataon’ny teo aloha.